इन्द्रेणीले कट्टरपन्थी धर्मको प्रतिनिधित्व गर्दछ जबकि समर्थकहरू सोच्छन् कि उनीहरू 'विविधता र समावेशीकरण' को लागि लडिरहेका छन्: मार्टिन भ्रिजल्याण्ड
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	14 अगस्ट 2019 मा	• 25 टिप्पणिहरु
In मेरो अघिल्लो लेख मैले वर्णन गरे जहाँ इन्द्रेणी प्रतीकको रूपमा आउँदछ। संक्षिप्तमा, इन्द्रेणी मूल रूपमा बाढी पछि नयाँ पृथ्वीको प्रतीक थियो। मानवको लागि चिन्हको रूपमा ईश्वरले इन्द्रेणी पहिले कहिल्यै देखेको थिएन। र परमेश्वरको यो म सधैंभरि, मलाई र तपाईं र हरेक जीवित प्राणीलाई तपाईं संग छ कि बीच बनाउन सबै पुस्तामा जो करारको टोकन छ, भन्नुभयो। यो एक धार्मिक चिह्न हो र वातावरणमा प्रकाश टुक्रिनु पनि हो। त्यो लेखमा मैले भने कि लुसिफर परमेश्वर सबै धर्महरूको भेषमा हुनुहुन्छ। लुसिफरलाई लाइट क्यारियर पनि भनिन्छ र यसैले इन्द्रेणीको सबै र colors्गमा बत्ती तोड्नु अर्को सication्केत हो जुन धार्मिक स्पर्शको साथ प्रतीकलाई जनाउँछ।
यो इन्द्रधनुको इसाई धर्ममा मात्र वा अन्य संस्कृति र धर्महरूमा पनि अर्थ छ कि छैन भनेर हेर्न उपयोगी छ, जसले गर्दा हामी वास्तवमा धार्मिक प्रतीक हो भन्ने गलतफहमी पाउँदैनौं; हालसालैका वर्षहरूमा यसलाई 'विविधता' र 'समावेशीकरण' को प्रतीकको रूपमा ल्याइएको भन्ने तथ्यको बाबजुद पनि। तब म यो पनि देखाउँछु कि अन्तिम दुई शब्दहरू वास्तवमा ओरोवेलियन नयाँ शब्दहरू बिल्कुल ठीक विपरितको लागि छन्, अर्थात् 'एकता सॉसेज' र 'बहिष्कार' (विपरीतलिंगीबाट सटीक हुन)।
वाइकिंग्स अनुसार इन्द्रेणी
वाइकिंग्सलाई प्राकृतिक संसारको बारेमा धेरै रोचक मिथकहरू थाहा थियो। नर्वेजियनहरूका अनुसार इन्द्रेणीले मिग्गार्ड र एसगार्ड भनिने स्वर्गको एक्सएनयूएमएक्स क्षेत्रहरू बीच पुल बनाउँछ। असगार्ड ईश्वरहरूको घर हो र इन्द्रेणी अविश्वसनीय रूपमा महत्त्वपूर्ण थियो किनकि यसले यस पवित्र स्थानमा नियन्त्रण गर्न अनुमति दियो। इन्द्रेणी पुललाई नर्वेजियनहरूले बिफ्रोस्ट भनिन्छ र कहिलेकाँहि यो जलिरहेको इन्द्रेणी पुलको रूपमा चिनिन्छ। केवल ईश्वरीय र योद्धाहरू जो युद्धमा मरे पूल पार गर्न सक्दछन्।
आदिवासी इन्द्रेणी पौराणिक कथा
अस्ट्रेलियाई आदिवासीहरूले इन्द्रेणीलाई साँपको रूपमा देखे, जो सबै सांसारिक चीजहरूको निर्माता थियो। यो बिभिन्न नामहरू दिइएको छ र अत्यधिक निर्भर गर्दछ जुन तपाईंले आदिवासी व्यक्तिको कुन समूहमा बोल्नुहुन्छ तर यो साँप नै हो जुन "ड्रीमि" "कथाहरूमा देखा पर्दछ। यो अवधि हो जहाँ एबोरिजिनल्सका अनुसार, सबै कुरा सिर्जना गरिएको थियो। इन्द्रेणी सर्प अमर हुन्छ, ईश्वर जस्तो केहि र साधारण साँप भन्दा धेरै ठुलो हुन्छ। सर्पले पोखरीको पानी चुहाएर भूमिमा थुक्छ र पानी पार्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। यस विश्वासको परिणामको रूपमा, यसलाई उर्वरताको प्रतीकको रूपमा देखिन्छ। यो सर्पलाई पनि सम्मानित गरिएको छ किनभने यो वर्षा बनाउनको लागि जिम्मेवार छ, तर यो श doubt्काका लागि जिम्मेवार छ र यस घटनाले समावेश नगरेको पीडाको लागि।
चिनियाँ इन्द्रेणी पौराणिक कथा
चिनियाँसँग इन्द्रेणी सर्प वा अजगरको तस्बिर पनि हुन्छ। यस जीवलाई ह Hong्ग भनिन्छ। ह Hongक twoको दुईवटा टाउको छन्; प्रत्येक अन्तमा एक ह Hong्ग शब्दको अर्थ चिनियाँमा इन्द्रेणी हो। इन्द्रेणीलाई दर्साउनु खराब शगुन मानिन्छ किनकि इन्द्रेणी भनेको महिला गर्भवती छ भनेर संकेत गर्ने हो। चिनियाँका अनुसार देवताहरू लाग्छ कि यस्तो हुनु हुँदैन। इन्द्रेणी आकाशको अवहेलनाको चिह्न हो, र धनु यस सन्दर्भमा गर्भवती महिलाको सूजन पेट प्रतिनिधित्व गर्दछ।
पुरातन चिनियाँ संस्कृतिमा इन्द्रेणीको अझै धेरै भिन्नताहरू छन्, तर तिनीहरू मध्ये धेरैले नकारात्मक सम्बन्ध दिन्छ।
चिनियाँ मिथकका निर्माता नुवा पनि इन्द्रेणीसँग सम्बन्धित छ। भनिन्छ इन्द्रेणी नुवाले बनाएका थिए। उनले विभिन्न र in्गीन ढु stones्गाहरूसहित आकाशमा एउटा क्र्याकको कारण यसो गरे जसले पानीमा अर्को ईश्वर गोong्ग गोong्ग मार्फत इन्द्रेणी बनाए।
यिन र यांगको मर्जिंग इन्द्रेणीमा पनि वर्णन गरिएको छ। रातो र निलो र togetherहरू सँगै मिसिन्छ र एकताबद्ध हुन्छन्। चिनियाँ संस्कृतिमा इन्द्रेणी विवाहको प्रतीक भएको छ।
हिन्दू इन्द्रेणी पुराण
हिन्दुहरूका लागि इन्द्रेणी भनेको साँच्चिकै चाप हो जसलाई युद्धका देवता र गर्जनले इन्द्रले भूतलाई मार्न खोजेको थियो र पृथ्वी र यसका सबै जनस destro्ख्यालाई नष्ट गर्नुभन्दा पहिले त्यसलाई मार्न खोजेको थियो।
इन्द्रको धनुको उत्पत्ति आफैमा एक कहानी हो। भनिन्छ कि उसले एउटा सिकर्मीलाई उसको पुरानो भाँचे पछि उसलाई नयाँ धनु बनायो। सिकर्मीले आफ्नो काम गरिसकेपछि, इन्द्रले एक कलाकारलाई आफ्नो नयाँ आर्च रंग्न भने जुन पहिला कहिल्यै नदेखीएको थियो। इन्द्रेणीको साथ, यो सुझाव छ कि प्रयोग पछि इन्द्रले आफ्नो धनु ताजा छ।
माथिको पाठ बाट हो विज्ञान.infonu.nl र स्पष्टसँग देखाउँदछ कि इन्द्रेणी विश्वव्यापी रूपमा सबै संस्कृतिहरूमा एक धार्मिक प्रतीक हो। यो सारांश सही ऐतिहासिक वर्णन हो कि होइन भन्ने प्रश्न बाहेक यो कम्तीमा अर्को स is्केत हो कि इन्द्रेणी कालदेखि नै विश्वभरि धार्मिक प्रतीक नै भएको छ। त्यसोभए किन हामीले अचानक यो विश्वास गर्नुपर्दछ कि यो मुख्यतया प्रतीक हो जुन केही दशक पहिले ग्रीनपीस संग राम्रो वातावरणको लागि स struggle्घर्षको संकेतको रूपमा पुनर्जीवित भएको थियो र अब अचानक एलजीबीटीआई आन्दोलनको लागि खडा छ? इन्द्रधनुष हाम्रो अनुहारमा हरेक दिन एक किसिमको कडा, निर्विवाद प्रचार हो र एलजीबीटीआई आन्दोलनका लागि यो एक किसिमको सैन्य प्रतीक हो भन्ने धारणा हो भन्ने तथ्य यो हो कि हामीले यसलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्दछ। कट्टरपन्थीताका साथ झण्डा फहराइएको छ र इन्द्रेणीको र everywhere जताततै लागू गरिएको छ, त्यो अवधिको याद ताजा गराउँछ जुन स्वास्तिकलाई कट्टरपन्थी रूपमा प्रमोट गरिएको थियो।
बाइबलको अन्तिम पुस्तकमा, "प्रकाशको जोन" भनिन्छ, इन्द्रेणी फेरी फेला पर्न सक्दछ र तपाईले स्पष्ट रुपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ कि इन्द्रेणीले बाइबलको ईश्वरलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। प्रकाश एक्सएनयूएमएक्समा (बाइबली सर्तहरूमा संकेत गरेझैं) यूहन्ना भन्छन् कि उसले कसैलाई स्वर्गमा सिंहासनमा बसिरहेको देख्यो र त्यो सिंहासन वरिपरि इन्द्रेणी रहेको छ। प्रकाश4मा एक शक्तिशाली परीको टाउको वरिपरि इन्द्रेणी छ। इन्द्रेणी वास्तवमा त्यो उच्चतम शक्ति द्वारा सर्वोच्च शक्ति र नियन्त्रणको प्रतीक हो; जहाँ म अघिल्लो लेखहरूमा वर्णन गरिएको बयानमा द्रुत जम्प बनाउँदछु कि 'एन्जिल' सिमुलेशनमा इनपुटहरू हुन्, जुन निर्माणकर्ताद्वारा नियन्त्रण गरिन्छ। "सिमुलेशन? तपाईको अनुकरण के हो?"हो, यदि तपाईं यस साइटमा नयाँ हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई अझै थाहा नहुन सक्छ कि म तपाईं र म" सिमुलेशनमा बस्छु "भन्ने स्थान लिन्छु। मैले त्यसलाई कोष्ठकमा राखें, किनकि तपाईं सिमुलेशनमा बस्न सक्नुहुन्न, तर केवल एक अभिनय खेलाडी हुन सक्छ। यसका बारे थप पढ्नु महत्वपूर्ण छ यो लेख श्रृंखला, किनभने त्यसो भए तपाईं पनि बुझ्नुहुन्छ किन म भन्छु कि लुसिफर यो ब्रह्माण्ड भाइरस सिमुलेशनको निर्माता छ।
त्यसोभए तपाईंले आफ्नो घरमा इन्द्रेणी झण्डा ल्याउनुभएको छ किनकि तपाईं LGBTI आन्दोलनलाई मात्र माया गर्नुहुन्छ; भिन्न यौन प्राथमिकताहरू कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ वा समाजबाट अलि कम पितृसत्तात्मकमा परिवर्तन गर्न विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ, तब त्यो आन्दोलनको प्रचार हो जुन तपाईं विश्वास गर्न चाहनुहुन्छ कि तपाईं केही 'राम्रो' को लागी लड्दै हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्दछ। सम्भवतः LGBTI आन्दोलनमा धेरैलाई थाहा छैन कि तिनीहरू एक धार्मिक प्रतीकवाद को पालना गर्छन् र वास्तवमा त्यहाँ एक धर्म छ। हो, हो, हो, वास्तवमा जहाँ तपाईं धार्मिक आन्दोलनको अन्त्य हुनुभएको छ जुन पुरानो क्रुसेडरहरू र जिहादको जत्तिकै कट्टरपन्थी (वा अझ बढी कट्टरपन्थी) हो। "हो, तर मेरो लागि यो धार्मिक प्रतीक होईन र यो केवल स्वतन्त्रता र मुक्तिका लागि हो"। तपाईं यो विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो एक पुरातन धार्मिक प्रतीक हो र यो अस्तित्वका लागि प्रतीक हो जसले यस संसारलाई सिर्जना गर्‍यो र विनाशको प्रतीक पनि (हल्का रूपमा व्यक्त गरियो: 'परिवर्तन')।
त्यस सन्दर्भमा प्रकाशको त्यो पुस्तक पढ्नु एकदम चाखलाग्दो छ। यो एक तथाकथित अगमवक्ता जोनको साइकेडेलिक यात्राको जस्तै देखिन्छ र यो मुख्यतया एक परमेश्वरको बारेमा हो जसले विनाशलाई प्रेम गर्नुहुन्छ (र नाश गर्न चाहने केही चुनिएका व्यक्तिहरूलाई बचाउनुहुन्छ)। वास्तवमा, हामी सबै धर्महरूमा पाउँछौं कि देवता कुनै पनी मायालु होइन। यो पनि स्पष्ट छ कि उसले राम्रो र नराम्रो मा नियन्त्रण छ र 'शैतान' जारी जब उहाँ चाहानुहुन्छ। जसले ऊनी धर्मका सबै प्रचारकहरूको भनाइलाई ध्यान दिएर सुनेको छैन र त्यस्ता पुस्तकहरू पूर्ण रूपमा ताजा पढ्छ, केवल क्रूर व्यक्तिलाई चिन्छ जसले अन्ततः आफ्नै सृष्टिलाई नष्ट गर्न र नयाँ कुराको लागि नयाँ सुरुवात गर्न द्वन्द्व प्रयोग गर्दछ। ।
मानवजातिलाई 'हर्माफ्रोडाइट' मा रूपान्तरण
इन्द्रेणी यसैले ठूलो बाढीको प्रतीक थियो (बाइबलमा "बाढी" भनिएको छ) र त्यसकारण भविष्यवक्ता जोनको "साइकेडेलिक यात्रा" मा ईश्वरीय शक्तिको प्रतीक पनि हो (जस्तो कि म यसलाई दयालु भन्छु) । मेरो विचारमा, जोहान्सले भर्खरै सिमुलेशन स्क्रिप्टको द्रुत-अगाडि देखेका छन्, तर तपाइँले त्यस लेखको श्रृंखलाको अध्ययन गरेपछि त्यो टिप्पणी अझ राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ।
म दोहोर्याउँदै जान्छु कि इन्द्रेणीले लुसिफरलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ; यस ब्रह्माण्ड अनुकरणको निर्माता। त्यो नराम्रो खबर हो, किनकि त्यो निर्माणकर्ता पनि विनाशक हो। यसैले म सँधै भाइरस सिमुलेशनको बारेमा कुरा गर्छु। हामी विनाशको त्यो प्रवृत्ति पाउँछौं, उदाहरणको लागि, प्रकाशको पुस्तकमा। त्यसैले यदि तपाईंसँग बस्ने कोठामा इन्द्रेणी झण्डा छ भने, तपाईं लुसिफर र को प्रतीक छ विनाशको प्रतीक घर ल्याए; जब तपाईं सोच्नुहुन्छ कि तपाईं केवल प्रगतिशील हुनुहुन्छ र अन्य यौन प्राथमिकताहरूको मुक्ति वा विभिन्न यौन झुकाव भएका व्यक्तिहरूबाट बढी स्वतन्त्रताको सामना गर्दै हुनुहुन्छ।
जब तपाईले बुझ्नुहुन्छ कि एलजीबीटीआई प्रोपेगान्डा (जसरी म जसरी भए पनि यसलाई "मुक्ति" को आवरण अन्तर्गत लिन्छ, तर वास्तवमा यसको गहिरा अर्थ छ, के तपाइँ पनि यो महसुस गर्नुहुन्छ कि यो मानव विनाशको प्रतीक हो। ; शताब्दियौंदेखि हामी ती मानिसहरूलाई चिन्छौं। के तपाई सोच्नुहुन्छ कि म भित्र जाँदैछु र वास्तवमा थाहा छैन म के कुरा गर्दैछु? तपाईंको रीसलाई एकै पल्ट राख्नुहोस् र मसँग विश्लेषण गर्नुहोस्।
धेरै लेखहरूमा मैले यो व्याख्या गरेको छु कि मेरो विचारमा LGBTI आन्दोलन 'विविधता र समावेशीकरण' का लागि कठोर छैन। विभिन्न यौन प्राथमिकताहरूमा अनुमान गरिएको प्रतिनिधित्व गरिएको विविधता यी सबै यौन प्राथमिकताहरू एक व्यक्तिमा मर्ज गर्न पूर्व चरण हो। त्यस अर्थमा, 'समावेशीकरण' सही वर्णन हो, किनकि तिनीहरू सबै मर्ज हुनेछन् (समावेश)। लक्ष्य वास्तविक छ हेटेरोसेक्सुअल गायब बनाउनुहोस् र यसरी यौन प्राथमिकता वास्तवमा 'बहिष्कृत' हुन्छ। यसैले 'हेटेरोसेक्सुअल' को H लाई संक्षिप्त LGBTI मा फेला पार्न सकिएन। त्यो H भनेको 'समलि .्गी' हो। त्यस अर्थमा त्यहाँ "बहिष्करण" वा "बहिष्कार" को कुरा छ र यसैले मैले यस लेखको सुरूमा भनेँ कि हामी यहाँ जर्ज ओर्वेलले आफ्नो पुस्तक एक्सएनयूएमएक्समा वर्णन गरिएको "नयाँ भाषण" मा काम गरिरहेका छौं। शब्दहरूको अर्थ उल्टो हुन्छ)। हामीलाई दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेदबाट छुटेको शब्द पनि थाहा छ र वास्तवमा फासीवादको एक रूप हो।
तपाईंले 'फासिज्म' भन्ने शव्द प्रयोग गरेर सोच्नु अघि, म तपाईंलाई कट्टरपन्थी झण्डा फहराउने र 'तपाईंको अनुहारमा' प्रतीकात्मक धक्का दिँदै सम्झना गराउन चाहन्छु। हामीले यो पनि देख्यौं कि 30 बर्षमा हाम्रा पूर्वी छिमेकीहरूसँग र त्यसपछि कोही पनि यसलाई हेर्न चाहँदैनथे। म इन्द्रेणी अनुयायीहरु बीच एक प्रकारको कट्टरपन पहिचान गर्दछ कि मलाई यसको सम्झना गराउँछ। र ती इन्द्रेणी अनुयायीहरूले फेरि महसुस गर्दैनन् कि उनीहरू विनाशको प्रतीकको प्रचार गरिरहेका छन्। म एक क्षणको लागि दोहोरिन्छु: इन्द्रेणी भनेको 'लाइट क्यारियर' हो, जो सिमुलेशनको प्रकाशमा स्विच गर्दछ; लुसिफरका लागि; मानवता विनाशको लागि। विनाश पछि, इन्द्रेणी आकाशमा देखा पर्दछ।
हामी यस संसारको विनाशको पूर्वपक्षमा छौं किनकि हामी यो जान्दछौं, मानिस सहित हामी यो जान्दछौं। In यो लेख मैले विस्तृत रूपमा वर्णन गरे कि मानवता कसरी उभयलिंगी हर्माफ्रोडाइटमा रूपान्तरण भइरहेको छ, 'लिंग-तटस्थ' भन्ने शब्द पछाडि लुकाइएको। यसको मतलब यो छ कि पुरानो आधारभूत यौन सिद्धान्त जसमा पुरुष र महिलाहरू सँगसँगै प्रजननको लागि झर्नुपर्‍यो पहिले हराउनु पर्ने थियो। त्यसकारण हामीले पहिलो चोटि (जुन म मात्र उल्लेख गर्नेछु) समलि .्गी प्रचार, सकेसम्म धेरै मानिसहरूलाई समान लि on्गमा झर्ने गवाहीको लागि साक्षी दियौं। अन्तिम लक्ष्य भनेको ती सबै यौन प्रवृत्तिहरू एक व्यक्ति भित्र हुनुपर्दछ। यो किनभने दुई लिes्गहरू शाब्दिक रूपमा एक व्यक्तिमा गाभिने छ, एक पटक मानिसलाई हर्माफ्रोडाइटमा रूपान्तरण सफल भएको छ। मानिसजाति यस सिमुलेशनको निर्माणकर्ताको लागि प्रतीकमा रूपान्तरित हुनुपर्दछ: बाफोमेट, द्विपक्षीय बोका (त्यसैले लसिफर)।
तपाईले बाइबलका पुस्तकहरू केवल एक पल्ट पढ्नुपर्दछ कि परमेश्वर (जुनसुकै धर्मको) विनाश पछि पनि हुनुहुन्छ। अवश्य पनि केही प्राणहरू बचाइए, तर त्यो 'नाकको सासेज' ले मानिसहरूलाई उपासकहरूको रूपमा लाइनमा लान मद्दत पुर्‍याउँछ। यो सबै भन्दा पुरानो थियो रूपमा 'समस्या, प्रतिक्रिया, समाधान'सूत्र अनुप्रयोग जुन हामीलाई थाहा छ। लुसिफर मानवताको विनाशको लागि हेर्दैछन्, किनभने विनाशको त्यो खतराको साथ, मानव जाति जहाजको लागि तयार हुन तयार भइरहेको छ। नूहको नयाँ सन्दूक भनेको ट्रान्सह्यूनिज्ममार्फत "मुक्ति" हो र "नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वी" मा संक्रमण छ जुन लुसिफरको एआईमा मर्जरको माध्यमबाट प्राप्त हुनेछ। गुगलका सीईओ रे कुर्ज्विलले त्यो क्षणलाई एकलता भन्छन् (हेर्नुहोस् यहाँ).
मानवजातिलाई हाल "परमेश्वरको स्वरूप" मा पुनर्निर्माण गरिएको छ। बाइबलको पुरानो छवि यिन-यांग द्वैत देवता थियो; आफूलाई परमेश्वर र शैतानको रूपमा प्रस्तुत गर्ने देवता। त्यसकारण मानिस वास्तवमा बाइबलको उत्पत्तिको पुस्तकमा परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गरिएको थियो। र त्यसकारण बाइबलको परमेश्वर भन्नुहुन्छ, "हामी मानिसहरूलाई आफ्नो स्वरूपमा बनाऔं।" त्यो लुसिफर हो जसले आफूलाई "हामीलाई" द्वैत रूपको रूपमा व्यक्त गर्दछ। यो द्वैद्व स्वतन्त्रताको कानून मार्फत यस सिमुलेशनका खेलाडीहरू प्राप्त गर्न आवश्यक थियो अन्तिम लक्ष्य तिर इच्छित सीधा वर्तमानमा (जस्तै ब्याट्रीमा प्लस र माइनस पोलले प्रत्यक्ष प्रवाह प्रदान गर्दछ)। आउँदै गरेको इन्द्रेणी अवधि पछि (त्यसैले प्रतीक), जुनमा पुरानो सृष्टि बाढी आउने छ र नयाँ तयार भइसकेको छ, यस नक्कलका निर्माताले आफूलाई 'एकमा अस्पष्ट' को रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्दछ, किनकि त्यसपछि हामीले स्वेच्छाले हाम्रो एआई प्रयोग गर्ने निर्णय गरिसकेका छौं। क्लाउड प्रणाली। हो, म शाब्दिक रूपमा एआई कम्प्युटर प्रणालीको बारेमा कुरा गर्दैछु। हामीले 'क्लाउड' सँग मर्ज गर्नु पर्छ। त्यसकारण बाइबलमा मसीह पनि बादलबाट ओर्लिनेछ। त्यो 'क्लाउड' हो।
त्यसैले मानवतालाई लुसिफरको अस्पष्ट छविमा पहिले नै पुन: निर्माण गरिँदै छ। त्यो लि gender्ग परिवर्तन पछि, मानवता transhuman मा रूपान्तरण हुनेछ। डिजिटल दासहरू त्यसपछि एआई प्रणालीमा आत्मसमर्पण गर्न तयार छन् र नयाँ क्लाउड ("नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वी") अनुभव गर्न सक्षम हुन 'क्लाउड' मा मर्ज गर्न। यो प्रलोभन चाल हो जुन मूल आत्मा (चेतनाका रूपहरू) लाई लुसिफरको एआई प्रणालीमा समर्पण गर्न आवश्यक छ।
हामीलाई थाहा छ सम्पूर्ण जीवविज्ञान यसकारण अस्तित्वमा रहनेछ (नूहको समयमा जस्तै)। के तपाइँ अब इन्द्रेणीको प्रतीकवाद पनि अलि राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ? यो सबै एक अर्कासँग गर्नुपर्दछ।
अब तपाईं अझै सोच्न सक्नुहुन्छ:ठिक छ, यसमा के गलत छ? हुनसक्छ यो अद्भुत प्रगति र अद्भुत परिवर्तन हो! म वास्तवमै त्यस लुसिफरलाई विश्वास गर्दछु"। म त्यो विचार बुझ्छु। अन्तमा, समाजमा लुसिफरका उपासकहरू प्रायः धेरै धन र सफलताको लागि उभिन्छन्। तपाईंले भर्खर संगीत संगीत हेर्नुपर्नेछ, जसमा माइले साइरस (र अरू धेरै) मनपर्दछ लुसिफर पूजाको बारेमा बोल्नुहोस्। के साथ गलत छ कि तपाईं बेवास्ता गर्नुहुन्छ कि लुसिफर तपाईं को हो भन्दा अधिक वा कम केहि छैन र तपाईं एक एआई भाइरस प्रणालीमा आत्मसमर्पण गर्नुहोस्। तपाईं मूल रूपमा चेतनाको रचनात्मक रूप हुनुहुन्छ। लुसिफर सिमुलेशन भाइरस सिमुलेशन हो जुन स्टेम सेलको 'मूल क्षेत्र'(सबै समावेशी रचनात्मक डाटा क्षेत्र जहाँबाट तपाईंको चेतनाको रचनात्मक फाराम उत्पन्न भयो) आक्रमण गर्न चाहन्छ। लुसिफर विनाशको लागि एक प्रतिष्ठा छ र यो एक भाइरस को उद्देश्य हो।
एकचोटि तपाईंले फेला पार्नुभयो कि हामी "सिमुलेशनमा" छौं र विश्वलाई थोरै यथार्थपरक देख्छौं जुन हामीलाई थाहा छ, ठूलो धागो मृत्यु र विनाश हो। इन्द्रेणी मृत्यु र विनाशको प्रतीक पनि हो। के यो समूहलाई अलविदा भन्न र यसैले आफैलाई आफैंले ड्र्याग गर्न मिल्नुको सट्टा 'मूलमा फिर्ता' छनौट गर्नुको साटो बुद्धिमानी छैन जुन लुसिफरको सिमुलेशन जालमा गहिराइ जान्छ? याद राख्नुहोस्: इन्द्रेणीले पुरानो पृथ्वीको विनाशको प्रतीक दिन्छ; यस सिमुलेशनको निर्माणकर्ता (यसलाई 'भगवान' पनि भनिन्छ) को पुरानो प्रवृत्ति, लुसिफर। त्यो इन्द्रेणी झण्डा जलाउने समय।
के बच्चाहरूको LGBTI सेक्स-छनौट शिक्षाको प्रदर्शन जैविक आधार छ?
ट्याग: विविधता, उद्धार, कट्टरपन्थी, कट्टरता, fascism, विशेष, समलैंगिकता, समलैंगिक, समावेशीकरण, LHBTI, प्रचार, इंद्रधनुष, इन्द्रेणी झण्डा, प्रतीक, प्रतीक
14 अगस्ट 2019 मा 10: 32
त्यो पप संगीत बर्षदेखि यसलाई भिजेको छ र वर्षौं लुसिफेरियन हो
उपासना अब गोप्य छैन।
यो आश्चर्यजनक छ कि हरेक जो शोबिज, राजधानी मा जान्छ
गर्वका लागि, राम्रो पुरस्कार पाउनुहोस्, उत्कृष्ट पुरस्कार पाउनुहोस्
मिकी भ्यान डि स्टोन्सले समेत उहाँलाई भने कि लुसिफर भनिन्छ।
14 अगस्ट 2019 मा 12: 08
3: 48 टेलहरू टेलहरू हुन्, केवल मलाई लुसिफर कल गर्नुहोस्
Mireille भान डेन एन्क लेखे:
17 अक्टोबर 2019 मा 18: 11
मलाई यो अनौंठो लाग्दछ कि मेरो समयका धेरै पप स्टारहरू बितिसकेका छन्। (कुनै संयोग छैन)
यो संगीतले वास्तवमा उर्जा प्रदान गर्‍यो। म ठूलो हुँदै जाँदा पाठहरू धेरै परिवर्तन भए। मेरो समयमा तपाईंसँग यो रोग थियो, मैले पहिल्यै सोचें कि एकदम अन्धकार थियो। तर त्यो आजकल मिठो छ।
तर अब म विगतको सकारात्मक आवृत्तिलाई मिस गर्दैछु।
14 अगस्ट 2019 मा 11: 27
"त्यसैले मानवता लुसिफरको अस्पष्ट छवि को प्रकाश मा पुन: निर्माण गरीरहेको छ। त्यो लि gender्ग परिवर्तन पछि, मानवता ट्रान्शुमानमा रूपान्तरण हुनेछ। "
उनीहरूले ट्विन्टरलाई तल झार्दै र उनीहरूको ठाउँमा नयाँ एउटा भवन, 'एक वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर' राख्दै देखाए।
II आदि को प्रतीकवाद बाहेक, यस भवनको आकार एक इन्जेक्शन सुई हो। जसले DNA को जानाजानी हेरफेरको संकेत गर्दछ। यसबाहेक, भवन एक विस्तारित एंटी-प्रिज्म हो जसमा इन्द्रेणीको र colors्गलाई एक मोडल मार्फत सेतो बत्तीको एकल बन्डलमा बदल्ने गुण हुन्छ।
त्यो बन्डल शीर्षबाट चम्कन्छ र चमकहरू निम्त्याउँछ।
तथ्य यो हो कि कुलीन वर्गले केवल ईथरबाट बिजुली खान्छ, जबकि हामी सबै तेल, ग्यास र बिजुलीको लागि उच्च मूल्यमा छौं। उनीहरूले पुरानो रोमेनेस्क / टार्टर संसारलाई नष्ट गरे जस्तै पिरामिडहरू, चर्चहरू र मस्जिदहरू मार्फत निःशुल्क ऊर्जाको साथ। ईथरको बारेमा ज्ञानले रोक्दछ र उनीहरू अब उनीहरूको AI, DW, EMF र क्लाउड चीजहरू यसका साथ गरिरहेका छन्। संयुक्त राष्ट्र चिन्हको निलो इजरायलको झण्डाको रंग हो; अन्तिम लक्ष्य; एउटा त्यस्तो देश जहाँबाट विश्वको बाँकी राज्यले शासन गर्दछ।
यसले स्वचालित रूपमा विश्व पृथ्वी र गुरुत्वाकर्षणको झूटमा तपाइँलाई ल्याउँछ। जस्तोसुकै अवस्था जस्तोसुकै भए पनि ईथर र यसद्वारा गरिएको फ्रिक्वेन्सी फिल्डलाई लुकाइन्छ र हावा र ग्यासहरूमा अनुवाद गरिन्छ।
किनभने तिनीहरू यसका बारे सबै कुरा रोक्दछन्, 5G वास्तवमा प्रकृति मा मापन गरिएको छैन; जुन सबैको आफ्नै विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रको एक सीधा अवैध अवैध छ; र रूख काट्ने र ज fire्गलमा आगो चाहिन्छ, किनकि ती छोटो तर चट्टानको कडा सिस्लिling फ्रिक्वेन्सीको प्रतिकार गर्दछन्; नतिजा स्वरूप, हाम्रो शारीरिक कार्यको पनि एक ठूलो कमजोर। कमजोर मानिससँगै उनीहरूले प्रजनन गरे र अन्तिम हतियारहरू लिनेछन्, प्रभुत्वको लागि मार्ग हावा हो।
इन्द्रेणीमा सात र colorsहरू हुन्छन्; र यो शबाथ क्लब अनुसार, किनकि त्यो यो हो, P अझै LGBTI मा थप्न आवश्यक छ। होईन पानको लागि होईन तर पेडोका लागि होईन। र अब उनीहरूले आफ्नो प्रयासलाई गति दिइरहेका छन्।
अन्तिम तर कम्तिमा होइन; सात नोहाइड यहूदी कानून पछि ट्रम्प द्वारा हस्ताक्षर गरिएको छ। "मार्शल कानून" सक्रिय हुने बित्तिकै उनीहरूले प्रभाव लिन्छन् (यदि केहि झूटा झण्डा भएमा)। यी7कानूनहरू गोयिम (बाँकी) का लागि तालमुडिक कानूनहरू हुन्। 662 अन्य कानूनहरू यहूदीहरूलाई लागू हुन्छ, हामीले ती डोहरूहरू चिन्नुहुन्न; ती लागू हुनेछन् इस्राएलमा 'टेकओभर' भएपछि।
त्यसोभए तपाईले इन्द्रेणीलाई नोहाइड कानूनका लागि प्रतीकको रूपमा फेला पार्नुभयो। तपाईं इन्टरनेटमा कहिँ पनि फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
यहाँ ती सबै डरलाग्दो कानूनहरूको बारेमा छ। https://www.eyeopeningtruth.com/the-un-is-not-your-friend-part-2-noahide-laws/
यसको बारेमा धेरै चिन्ताजनक कुरा यो हो कि यदि तपाईं ती कानूनहरू पालना गर्न चाहनुहुन्न भने, पृथक्करण निम्न छ।
सब भन्दा महत्त्वपूर्ण मूर्ति पूजा मा प्रतिबन्ध छ; त्यसोभए उनीहरूको लुसिफरको भन्दा भिन्न सत्य / ईश्वर / आराधना कि तिनीहरूले स्त्री बनाउने छन्; म्याडोनाले तयार गरिसकेपछि, विश्वस्त हुन जान्छ।
त्यसैले यदि तपाईं राज्य; तपाईंको बकवास संग नुन, म मेरो मूल अनुसरण, मेरो मुटु, र तपाईंको मजाक, तपाईं मूलतः बोबिन हो। त्यसैले एलईडी बत्तीहरू, स्मार्ट मिटर, 5g नेटवर्क र तपाईंको मोबाईल र जो चिप जान्दछ।
यदि तपाईंले चिप अस्वीकार गर्नुभयो भने, त्यसोभए तिनीहरू तपाईंलाई एक मसीहीको रूपमा योग्य बनाउँछन्, किनकि नयाँ नियमले 'जनावर' लाई तपाईंको हात वा निधारमा चिन्हको रूपमा, एक्सएनयूएमएक्सको बताउँछ; बार कोड लेखमा पहिले नै के छ; यसमा सँधै 666। त्यसोभए विश्वस्तता र जबरजस्ती पनि।
मैले हिजो भेट्टाएँ कि ट्रम्पले आफ्नो नाक बढाए। र गोरा / रातो छैन। त्यसोभए ऊ केवल उनमध्ये एक हो, जो पनि एक साबातियन हो, तर पनि खजार-अस्केनाज़ी-नाजी-सियोनवादी। ऊ ठगीको खेललाई ठूलो जोकरको रूपमा खेल्छ र मार्शल कानून सक्रिय हुनु अघि सबै अन्तिम ढोकाहरू धकेल्न उसले सक्दो गरेको छ।
झाडिहरू पनि अस्केनाजिस हुन्; हिलारी पनि ओबामाकी आमा थिइन् (ओबामा राष्ट्रपति हुनु भन्दा पहिले उनीहरूले स्कूलका अभिलेखबाट उनको सबै डेटा लिएका थिए) र अब ट्रम्प पनि; जबकि हामी लाग्छ ऊ आरामदायी स्कट हो।
यहाँ क्लाउड इजरायलबाट संचालित हुनेछ कि विकास: https://www.abeldanger.org/israel-takes-over-cloud-computing-for-the-pentagon/?fbclid=IwAR1qBRnYvp5Tjx8PuY5dEb2kiBu6L7naCONoXclbgFSxXTA2KUOuBYYyswU
यहाँ पेडोफिलियाको अन्तिम चरणको लिंक; जुन तल्मुदिक यहूदी धर्ममा गहिरो जरा गाडेको छ (जुन सबै रब्बीहरूलाई अँगालेर छ र इन्टरनेटले यसको अन्त्य नगरेसम्म गोप्य राखिएको छ)। यो धेरै युवा बच्चाहरूको प्रत्येक MK-Ultra प्रोग्रामिंगको आधार बनाउँछ। र कसरी उनीहरू शीर्ष स्थानका लागि ब्ल्याकमेल उपकरणको रूपमा यौनका साथ संसारलाई बन्धक बनाएका छन्।
यो एकदम डरलाग्दो देखिन्छ ... र सायद कसैलाई पनि यो महसुस हुन्छ ...
14 अगस्ट 2019 मा 14: 14
यो लगभग2वर्ष पहिले हो, र यो सही लक्ष्य भएको जस्तो देखिन्छ।
ट्रम्प नोहाइड कानूनहरू
14 अगस्ट 2019 मा 18: 44
र वास्तवमा सानो क्याबलले प्रतीकहरू प्रयोग गर्दछ जुन सबैले काठीमा राख्नको लागि प्रयोग गर्दछ। किनभने साधारण मानिसहरूलाई थाहा छैन उनीहरूको वास्तविक अर्थ के हो।
उदाहरणको लागि तथाकथित "पीस साइन" लिनुहोस्, तपाईलाई त्यो गोलाकार प्रतीक ठाडो पट्टी र तल दुई पिरामिड (बायाँ र दायाँ) को साथ थाहा छ। यसको शान्तिसँग कुनै सरोकार छैन।
यस प्रतीकको मूल अर्थ "दुख र निराशा" हो।
मूल अर्थ सँधै लागू हुन्छ! (प्राकृतिक कानून)।
लाखौं मानिसहरू यसको साथ टी-शर्टहरू, स्टिकरहरू, बटनहरू र घरमा पोस्टरहरूमा हिंड्छन्।
र तपाई आश्चर्यचकित हुनुभयो कि किन त्यहाँ धेरै दु: ख छ? )
18 अगस्ट 2019 मा 22: 01
मलाई विश्वास छ कि पेडोका लागि पी चाँडै थपिनेछ। यस वर्ष, असन्तुष्ट नामको साथ पहिलो पेडक्लब, "बाल मुक्ति कोष", एम्स्टर्डमको समलि .्गी प्राइडको समयमा डु para्गा परेडमा सहभागीको रूपमा दर्ता गरियो। तिनीहरू सोच्छन् कि तिनीहरू सम्बन्धित छन् किनकि यो सबै पछि अभिमुखिकरणको बारेमा हो। र एक गैर-अभ्यास पेडोको रूपमा तपाईंलाई एक पटक सम्बन्धित हुन अनुमति दिइनु पर्दछ। त्यसो भए पहिलो कदम पहिल्यै लिइसकियो।
र त्यसपछि अरू केहि (वैसे पनि, म आफैं समलि .्गी हुँ र गुलाबी त्रिकोण किन इन्द्रेणी झण्डाले प्रतिस्थापित गरियो भनेर सँधै सोच्दछु, तर माथिको धेरै कुरा प्रस्ट देखिन्छ), निम्न नारा वा नारा: "भिन्न हुन हिम्मत गर्नुहोस्" अनौंठो छ। तपाईलाई फरक हुन प्रोत्साहित गरियो। तर यो कुरा त्यस्तो होइन, यो हुनु पर्छ: "आफूलाई आफैं हुन हिम्मत गर्नुहोस्"। मेरो विचारमा, यो एक पूर्ण भिन्न सन्देश हो र आफैं हुन चार्ज हो, प्रोत्साहन भन्दा भिन्न हुनु भन्दा। यो सबै धेरै भ्रामक छ।
14 अगस्ट 2019 मा 12: 11
रानी, ​​फ्रेड्डी बुध र शैतान
14 अगस्ट 2019 मा 12: 48
राम्रो लेख फेरि। खैर, यदि सबै ठीकठाक छ भने, धेरै मानिसहरूलाई अब ती व्यक्तिहरू हुन् जसले सामाजिक ईन्जिनियरहरूको रूपमा समाजमा ती सबै 'सुन्दरता' ल्याउँछन्, कम्तिमा उनीहरूको दृष्टिकोण अनुसार विश्व सुधारकर्ता।
दु: खी छ कि नाम र नाम भएका ती व्यक्तिहरूको नाम राख्न सकिदैन किनकि दुर्भाग्यवश हामी शान्त, सूक्ष्म, लुक्ने तानाशाहीमा बाँचिरहेका छौं। तिनीहरूलाई नाम दिएर तपाईं समस्यामा काम गर्न सक्नुहुन्छ। तर दुर्भाग्यवस, सामान्य जनसंख्या, उत्तम दासहरू, लाग्छ सबै ठीक छ कि एक शत्रु आप्रवासी 'कुलीन' सेवा को रूप मा। यहाँसम्म कि यस देश मा आप्रवासीहरू, असन्तुष्ट हीरा 'जसले शासन परिवर्तन ल्याउन सक्छ, नयाँ प्रेरणा, तपाइँ अब छोटो समय पछि सुन्नुहुन्न। तिनीहरूलाई यो पनि मनपर्दछ कि तिनीहरूलाई पूर्ण दासको रूपमा समावेश गरिएको छ। धेरै नराम्रो, हराएको अवसर।
म प्रतिक्रिया दिन रोक्छु। Siesta लिनुहोस्। उत्तम दासहरू र उनीहरूको बेवकूफ इस्तीफाको बानी हुन सक्दैन जुन कुनै उत्साह र प्रेरणा छैन। सिस ट्रान्जिट ग्लोरिया मुंडी। खोकी
14 अगस्ट 2019 मा 14: 33
Something केहि राम्रो कुरा खराब हुन सक्छ? र भिसा उल्टो? यदि यस प्रश्नको उत्तर होईन भने, तपाईं कसरी भन्न सक्नुहुन्छ कि ईश्वर (जीसस) र लुइसिफर एकै व्यक्ति हुन्। लुइसिफर, शैतान एउटा त्यस्तो प्राणी हो जसले आफैंले राम्रो (लाइट) लाई फर्कायो किनकि उसले आफूलाई परमेश्वरभन्दा माथि राख्न चाहान्थ्यो।
कुनै प्राणी कहिल्यै पनि यसको निर्माताको भन्दा राम्रो हुन सक्दैन। यो व्यक्ति (अस्तित्व) यति अस्पष्ट छ कि उसले बनाएको सृष्टिलाई नष्ट गर्न चाहान्छ, जुन हामी अहिले अनुभव गरिरहेका छौं।
समाजको आधारशिला परिवार हो, त्यहाँ कति परम्परागत परिवारहरू छन्?
अहिले र चाँडै भइरहेको सबै कुराको पूर्वानुमान गरिन्छ, जसलाई आज मानिसहरूले 'परी कथा पुस्तक' भन्छन्।
यसैले म यो साइटमा लेखहरू पनि पढ्न मन पराउँछु। किनकि यो केवल सुरूवात हो 'हामीले अहिलेसम्म केहि पनि देखेका छैनौं'।
किनकि लेखिएको छ "अन्तको दिनमा ऊ गर्जने सिंहझैं 'शैतान' वरिपरि घुम्नेछ कि उसले निल्नेछ
14 अगस्ट 2019 मा 15: 11
त्यो बाइबल अनुसार कहानी छ।
मेरो विचारमा, लुसिफरले वास्तवमै "राम्रो" र खराब प्रतिनिधित्व गर्दछ, त्यसैले दुबै "भगवान" र "शैतान" (दिमाग शैतान लुसिफर होइन): खेलको खेलाडीहरुलाई चाहिने दिशातिर धकेल्ने दोहोरोपन चाहिन्छ।
बाइबलका परमेश्वर वास्तवमा धेरै हत्यारा व्यक्ति हुनुहुन्छ। उदाहरणको लागि, ऊ तथाकथित पापको लागि रगत हेर्न चाहन्छ। त्यसोभए परमेश्वर वास्तवमै वास्तवमै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा कत्तिको “राम्रो” र मायालु छ भनेर विवाद गर्न सकिन्छ। कथा पछि उनले आफ्नै छोराको बलिदान दिए भन्ने तथ्यले उसलाई अझै रगत हेर्न चाहने मान्छे बनाउँछ। तपाईं केवल यसो भन्न सक्नुहुन्छ: "ठिक साथीहरु, तपाईलाई थाहा छ मैले के क्षमा दिएँ जब ती पापहरू गरिन्छ र केस। हामी बस उनीहरू सबैको साथ एक आकाशमा र यो बालुवाको एक राम्रो आरामदायक पेय गरौं "। तर होइन, त्यहाँ रगत बगिरहेको हुनुपर्छ।
लुसिफरको दोहोरो भूमिका: ईश्वर र शैतान यस्तो पुस्तक जुन दिमाग नियन्त्रण स्क्रिप्टको बाहेक अरू केही हुन सक्दैन।
14 अगस्ट 2019 मा 18: 14
वास्तवमा, हरेक धर्म मन नियन्त्रण स्क्रिप्ट हो। र यती राम्रो गरीएको छ, यदि तपाईंलाई सानो छँदादेखि नै यो स्क्रिप्टको साथ तपाईंको घाँटीमा धकेली गरियो भने, यसले घोर यसलाई मृत्युसम्म पुर्‍याउनेछ (अपवाद बाहेक (हे मार्टिन? :))।
र त्यो धेरै तर्क र तथ्यहरूको बावजुद (वा तार्किक सोच) कि यो सबै बकवास छ र डराउने रणनीति र पूर्ण नियन्त्रणको लागि एक उपकरण हो। र त्यो उपकरण स्क्रिप्टले (तपाईंको दास मास्टरहरू) लेखेको सानो समूहको लागि धेरै उपयोगी छ।
तपाईं लगभग यो बाहिर टोपी लिन सक्छ; )
14 अगस्ट 2019 मा 17: 30
"एक प्राणी यसको निर्माताबाट कहिले पनि धेरै हुन सक्दैन"।
गलत यदि एलोन कस्तूरीले सिमुलेशन बनाउँदछ र तपाईं त्यो न्युरलिink्कको माध्यमबाट त्यो सिमुलेसन खेल्न थाल्नुहुन्छ, एलोन तपाईंको सिमुलेशनको भगवान हुन सक्छ (सिमुलेशनमा तपाईंको अवतारबाट देखिन्छ), तर अझै पनी सोफेमा बसिरहेको छ र खेल खेलिरहेको छ (तपाईंको मूल) एलोनले केवल उसको टाउकोको लागी एक धमाका दिनु पर्छ र उनी बाहिरिन्।
14 अगस्ट 2019 मा 18: 46
12 मार्च 2020 मा 00: 08
तपाईंसँग लिंक वा अन्य कागजात छ।
शान्ति चिन्हको यति धेरै महत्त्व छ जस्तो देखिन्छ, तर यो कहिलेकाँही किनारमा जान्छ
14 अगस्ट 2019 मा 19: 30
यदि तपाईं त्यो 'लिंक' मा जडित हुनुहुन्छ भने, हो। तर मसँग फरक प्रदायक छ 😉
"गलत" रचनाकारले के गर्नेछ? उसले प्लग तान्नेछ। दुबै भर्चुअल विश्व र वास्तविक संसारमा।
14 अगस्ट 2019 मा 19: 58
लुसिफर मूल स्रोत भन्दा धेरै तल्लो तहमा केवल एक सिर्जनाकर्ता छ। तपाईंको पुरानो विश्वासलाई होल्ड गर्नुहोस् र एक क्षण लिनुहोस् सिमुलेसनको बारेमा लेखहरू अध्ययन गर्न। तपाईंको 'भगवान' को अवधारणा पूर्ण रूपमा त्यो एक पुस्तकमा निर्भर गर्दछ। के तपाईं साँच्चिकै विश्वास गर्नुहुन्छ कि त्यो पुस्तक अझै सत्यताले भरिएको भए अस्तित्वमा थियो?
14 अगस्ट 2019 मा 20: 28
के तपाईं साँच्चिकै विश्वास गर्नुहुन्छ कि त्यो पुस्तक अझै सत्यताले भरिएको भए अस्तित्वमा थियो?
हो, मार्टिन, म गर्नेछु। यसलाई विश्वास भनिन्छ। नियम र अनुष्ठान बिना।
यद्यपि मँ तपाईको तर्क र दृष्टिकोणसँग म सधैं सहमत छैन, पक्कै पनि चाखलाग्दो छ। विशाल बहुमत वास्तविकता पनि हो। केवल धेरै धेरै व्यक्तिहरू चाहँदैनन् वा हेर्न सक्दैनन्। तपाईंले उनीहरूको आराम क्षेत्रबाट तिनीहरूलाई हटाउनुभयो।
सत्य एक तरीकाले यसलाई कमजोर बनाउँछ। र देखाउँदछ कि मानिस ना naked्गो छ।
तपाईं मेरो विचारसँग सहमत हुनुहुन्न, जबसम्म हामी एक अर्कालाई ठाउँ दिन्छौं।
15 अगस्ट 2019 मा 10: 00
मार्टिन तपाईंले यो कागजात देख्नु भएको छ, यदि हो भने तपाईं यसको बारेमा के सोच्नुहुन्छ? एकचोटि "यूरोप अन्तिम लडाई - त्यहाँबाट उत्तम सत्य वृत्तचित्रहरू मध्ये एक: भागहरू 1 - 10"
16 अगस्ट 2019 मा 00: 21
16 अगस्ट 2019 मा 15: 47
के यो हो वा हो?
वा तपाईको भन्नुको मतलब तपाईले यसलाई हेर्नु भएको छ, तर भन्न सक्नुहुन्न कि यो सत्य हो कि होइन?
17 अगस्ट 2019 मा 14: 12
कसरी यो नक्कली समाचार ला पोलेनबर्ग्स भ्लगर्सरेल (नक्कली समाचार उत्पादन) बनाइएको शैलीलाई एकै साथ राखिएको छ हेर्नुहोस्।
शुद्ध अचेतन प्रोग्रामिंग तथाकथित (कार्यवाही) नक्कली क्रिश्चियनहरूको साथ (तपाईंको शुद्ध अभिनय)। पूरै फिल्म इन्द्रेणी प्रचार वरिपरि घुम्छ, जसमा इन्द्रेणी निरन्तर प्रदर्शित हुन्छ। नक्कली विरोध र अनुवर्ती। मिडिया भनेको प्रमुख नक्कली समाचार निर्माताहरू हुन् जसले मानिसहरूलाई प्रोग्राम गर्छन्।
एग्नेस जोनचेहेरी लेखे:
21 अगस्ट 2019 मा 15: 20
कि LGTB लबीको इन्द्रेणी झण्डाले सबै सामान्य मानदण्ड र मूल्यहरू धोई दिन्छ, एक नयाँ बाढी पक्कै कल्पनाको लागि अपील गर्दछ।
मानिस फिर्ता एक रोग (भेदभाव विकार) (अन्तर्विरोधता) लाई सामान्य बनाउँन लैजान डिसफोरियाका लागि अधिक केसहरू प्राप्त गर्न कानूनमा राख्छन्। तर जान्नुहोस् कि नम्बर 1% भन्दा तल छ! प्रायः जसो रिपोर्ट गरिएको हुन्छ त्यो सांस्कृतिक वा मनोवैज्ञानिक रूपमा निर्धारण गरिएको छ र जैविक होइन। केटीको रूपमा अब केटोसँग पहिचान गर्न 'इन' भएको छ।
डा। भ्यान डेन आरडवेगले यसलाई तपाईंको वास्तविक लिंग (मनोवैज्ञानिक) मा बाल्यकाल र युवावस्थामा घाइते हुने परिणामहरूको रूपमा देख्दैन।
ती भविष्यवाणीहरूमा पनि ध्यान दिनुहोस् किनकि त्यहाँ यस बारे धेरै चर्चा भएको छ र यो इसाई जियोनिस्टहरू हो जसले सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पार्छ। अब समूह छैन कि यो सबै स्पष्ट देख्दछ ...
2 अप्रिल 2020 मा 10: 46
टेलिग्राफले पोष्ट गरेको फोटोमा राम्रो नजर राख्नुहोस्। विशेष गरी गरिबहरूलाई, जुन तपाईंले कल गर्नुभयो (Branweermanwijf)
यस्तो देखिन्छ कि फुटबल मैदानहरू र स्कूलहरूले साइटमा इन्द्रेणी झण्डा लिन अस्वीकार गर्न सक्छन्, त्यसैले यसलाई एक दायित्व भनिन्छ।
फायर ब्रिगेडका व्यक्तिहरू, एह जीवहरू खुशीसँग खेलमा भाग लिन्छन्, माथिकोबाट थोपिएको, अवश्य पनि, सरकारी काम (आज्ञापालन)
2 अप्रिल 2020 मा 10: 55
एक पुरुषको शरीरमा एक महिलाको टाउकोको फोटोशप जस्तो देखिन्छ ... कपालयुक्त मांसपेशि हातहरू ..
ठिक छ ... यसलाई फेरि पढ्नुहोस्
« किन ट्रान्सजेंडर 21 शताब्दीको लागि नयाँ आदर्श हुन्छ र विषमलैंगिक गायब हुन्छ
5G खतरनाक छ र यो कसरी गोप्य रूपमा स्थापित छ »
कुल भ्रमण: 4.267.546